Factory Robot EOD - Mpanamboatra Robot EOD Shina, Mpamatsy
Robot robot EOD ER3 (M)
Topi-maso robots EOD dia ampiasaina indrindra hiatrehana ireo asa mifandraika amin'ny baomba, ary azo ampiasaina ihany koa mba hahitana ny toerana sarotra tratran'ny olombelona. Ny manipuleur EOD 6-degree-of-fahalalahana dia afaka mihodina amin'ny zoro rehetra, ary afaka misambotra zavatra mavesatra hatramin'ny 55KG. Ny chassis dia mandray rafitra crawler + swing swing roa, izay afaka mifanaraka amin'ny terrains isan-karazany ary miady haingana amin'ny fametrahana azy. Mandritra izany fotoana izany, ny robot dia manana fifehezana tariby ary afaka miasa lavitra amin'ny alàlan'ny tariby eo ambanin'ny tambajotra inter ...
Robot robot ER3 (H) EOD
Topi-maso robots EOD dia ampiasaina indrindra hiatrehana ireo asa mifandraika amin'ny baomba, ary azo ampiasaina ihany koa mba hahitana ny toerana sarotra tratran'ny olombelona. Ny manipuleur EOD 6-degree-of-fahalalahana dia afaka mihodina amin'ny zoro rehetra, ary afaka misambotra zavatra mavesatra hatramin'ny 100KG. Ny chassis dia mandray rafitra mandady, izay afaka mifanaraka amin'ny tanety isan-karazany ary miady haingana amin'ny famaritana. Ny robot dia misy fitaovana fandefasana tariby mandeha ho azy, izay azo fehezina lavitra amin'ny tariby raha sendra tambajotra ...
Robot robot EOD ER3 (S-1)
Topi-maso robots EOD dia ampiasaina indrindra hiatrehana ireo asa mifandraika amin'ny baomba, ary azo ampiasaina ihany koa mba hahitana ny toerana sarotra tratran'ny olombelona. Ny manipuleur EOD 6-degree-of-fahalalahana dia afaka mihodina amin'ny zoro rehetra, ary afaka misambotra zavatra mavesatra hatramin'ny 10.5KG. Ny chassis dia mandray rafitra crawler + swing swing roa, izay afaka mifanaraka amin'ny terrains isan-karazany ary miady haingana amin'ny fametrahana azy. Mandritra izany fotoana izany, ny robot dia manana fifehezana tariby ary afaka miasa lavitra amin'ny alàlan'ny tariby ambanin'ny tambajotra int ...